Xulka Argentin Oo Brazil Kaga Guuleestay Koobka Copa America 2021
HomeWararka CiyaarahaXulka Argentin oo Brazil kaga guuleestay Koobka Copa America 2021
July 11, 2021 Wararka Ciyaaraha, Koobabka Qaramada 0
Saacadihii dambe ee xalay waxaa bilawday kulankii fiinaalka Copa America 2021 ee u dhexeeyay xulalka Argentina iyo Brazil kaasoo dhammaadkiisu ay beegneyd aroornimada xilliga Geeska Afrika.
Xulka Argentina ayaa ku guuleystay Copa America markii 15-aad isagoo xalay ciyaartii fiinaalka ku adkaaday gool uu Angel Di Maria dhaliyay daqiiqaddii 22-aad ee qaybtii hore ee ciyaarta.
Dhinaca kale, xulka Jaalleyaasha lagu naaneyso ee Brazil ayaa fursad badan sameeyay qaybtii labaad ee ciyaarta, balse waxaa kabaha la xirtay goolhayaha xulka La Albiceleste ee Emiliano Martinez kaasoo sameeyay badbaadinno muhiim ah.
Si kastaba ha ahaatee, xiddigaha Argentina ayaa soo af-jaray abaartii koob la’aanta ee soo bilaabatay 28 sano kahor, waxayna sidoo kale darajada xulka ugu hanashada badan Copa America la wadaageen Uruguay oo hore 15 jeer u qaadday.
Geesta kale, guushan waxay ahmiyad gaar ah u lahayd Kabtanka Argentina ee Lionel Messi kaasoo markii ugu horreysay tartan weyn kula guuleystay xulkiisa, waxaana si kale haddii loo dhigo guushan ay sare usii qaadday maqaamkiisa kubadda cagta iyo fursadda uu ku heli karo laacibka ugu wanaagsan dunida markiisii toddobaad.
Tababarahiisa xulka, Lionel Scaloni ayaa sheegay inuu Messi ciyaaray kulammadii Colombia iyo Brazil isagoo qaba dhaawac bowdada ah, sidoo kalena uu xanuun ka dareemayay anqowga isagoo kaga dhaawacmay kulankii wareegga afar-dhammaadka.
Waxyaabaha kale ee soo jiitay dareenka warbaahinta ciyaartii xalay waxaa ka mid ahaa in Neymar uu u yimid Messi kaddib dhammaadka ciyaarta isagoo ay indhihiisu ilmeynayaan, labada xiddig ayaana laabta is geliyay iyagoo si saaxiibtinnimo, hambalyeyn, farxad iyo xanuun wada qabsasho ah bogga isugu hayay ilbiriqsiyo ku dhow hal daqiiqo.
Dhinaca kale, Messi ayaa markii uu soo dhammaaday tartanka waxaa la guddoonsiiyay biladaha laacibka ugu wanaagsan tartanka iyo xiddiga ugu goolasha badan tartanka, waxaana intaas u sii dheer inuu ahaa xiddiga ugu gool caawinta badan tartanka Copa America sanadkan 2021.
Ugu dambeyn, Argentina iyo weeraryahankooda Messi ayaa gacanta ku dhigay koobka xulalka Koonfurta America, waxaana daawadayaasha, qoraayaasha iyo shaqsi walba oo ku leg leh kubadda cagta taageersanaa inay Messi iyo xulkiisa mudan yihiin ku guuleysiga tartan weyn.